Health – Mix Khabar
इलाम– पाँचथरको मिक्लाजोङ गाउँपालिका–३, आरुबोटेनजिकै २ परिवारका ९ जनाको हत्या हुँदा भागेर बाँचेकी बालिकाको उपचार १ नम्बर प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको उपचार गर्ने जनाएको हो। अन्दाजी १४ वर्षीया सीता खजुम हतियारसहित आएको मुकुण्डोधारी व्यक्तिले परिवारका अरू व्यक्तिलाई भकाभक प्रहार गर्न थालेपछि घरबाट राति नै हाम ...
हेर्नुहोस कफीको अनौठो जादु ! जस्तो सुकै जिद्दी दागलाई पनि सजिलै पार्छ सखाप !
सुन्दरता महिलाहरुको लागि एक प्रतिक हो । तर अनुहारमा आएका विभिन्न दागको कारण महिलाहरुको सुन्दर हुने चाहनामा परिवर्तन देखिएको हुन्छ । लामो समय देखि अनेकौ उपाय अपनाएर उपचार गर्दा गर्दै थकित भएर उपचार गर्नै छोडेका हुन्छन् । यस्तो समस्या धेरै महिलामा हुने गर्छ । अनावश्यक दाग हटाउन हजारौ हजार पैसा पनि र्खच गरिसकेका हुन्छन् । त्यसकारण यस्तै चिन्तामा परेका महिलाहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै लामो समयदेख...
गर्मी मौसममा छालामा प्याज रगड्दा हुन्छन् यस्ता ५ अचुक फाइदा जान्नुहोस्
खानाको साथ-साथै सलादमा प्याजको उपयोग गर्दा स्वाद र स्वास्थ्य दुवैका लागी फाइदाजनक हुन्छ । प्याज खानाले फाइदा हुनुको साथै प्याज लगाउदा अर्थात् छालामा रगड्दा पनि आश्चर्यजनक फाइदा मिल्छ । छालामा प्याज रगड्दा हुने ५ फाइदा यस्ता छन्, जान्नुहोस् । १-खुट्टाको तल पोल्ने समस्याबाट बँच्नको लागी पनि पिसेको प्याज रगड्नु लाभदायक हुन्छ । यसले तपाईलाई लु लाग्नबाट पनि बचाउँछ । २-छालाको इन्फेक्शनलाई नष्ट गर्नको...
जंगलको विषाक्त च्याउ खाँदा तीनजनाको ज्यान गयो
बेसीसहर - लमजुङमा विषाक्त च्याउ खाँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा क्व्हालोसोंथर गाउँपालिका–९ गिलुङका ५० वर्षीय सुलबहादुर क्षेत्री, उनका १२ वर्षीय छोरा मन्तोष क्षेत्री र छिमेकी १० वर्षीय साजन क्षेत्री रहेका छन् । उनीहरुको जंगलको विषाक्त च्याउ खाँदा मृत्यु भएको हो ।बैशाख २७ गते शुक्रबार जंगली च्याउ खाँदा गम्भीर बिरामी परेका उनीहरुलाई उपचारको लागि पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेज लगिएको थियो...
गर्मीमा स्वास्थ्यका लागि दुधभन्दा बढि दही खानु लाभदायक , हेर्नुहोस् यस्ता छन् दहि खादा हुने २० फाइदाहरु
नेपाली समाजमा एउटा मान्यता छ, कुनै कामको सुरुवात गर्नुअघि दही खानाले उक्त काममा सफलता मिल्दछ । दही दूध हामीलाई मन पर्ने खानेकुरा भित्र पर्दछ । दूध र दही सजिलै जहाँ पनि पाउन पनि सकिन्छ । यी दुवैको सेवन स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । तर दूधभन्दा दही खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । अपच हट्छ दहीमा भुटेको जिरा पिसेर त्यसमा अलिकति नुन र मरिच हालेर बिहान खाएमा खाना राम्रोसँग पच्छ ।टाउको दुखाइ हटाउँछ ब...
क्यान्सर-मुटुरोग-दुर्घटना-मिर्गौला रोगभन्दा रेबिज घातक , थाहै नपाई यसरी रेबिजले लिँदैछ ज्यान
काठमाडौं । शुक्रराज सरुवारोग अस्पतालमा रेबिजको उपचारको क्रममा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ । कुकुरले टोकेको त हो नि, घाउ ठीक भइसक्यो, छिमेकीको कुकुरले टोकेको त हो नि भनेर बस्दा रेबिजले धेरैलाई मृत्युको मुखमा पुर्याएको छ । सरुवा रोग विशेषज्ञ तथा शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा।वासुदेव पाण्डेले कुकुरले टोकेको पीडा अत्यन्त दुःखदायी हुने बताए । सरकारले रेबिजविरुद्ध भ्याक्सिन निःशुल्क प्रदान ...
पवन कार्की (२०), महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल,न्युरो वार्डको बेड नम्बर ४४ मा १० महिनादेखि शैय्यारत छन्। एकछिन आराम नगरी कुदिरहनुपर्ने उमेरको छोरा बेडमै स्याहार्नु पर्दाको दुःख उनकी आमा शर्मिला कार्कीशब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनन्। यसबीचमा झेलेका कष्ट उनलेस्वास्थ्यखबरकर्मी सिर्जना खत्रीलाई सुनाएकी छिन्। उनको उपचार अनुभूति उनकै शब्दमाः हाम्रो पुख्र्यौली घर विराटनगर हो। अहिले हामी सपरिवार धापासी हा...
मोटोपनले हैरान हुनुहुन्छ ? घिउ खादा हुन्छ वजन कम देखि मुटुको लागि यस्तो फाइदा ,जान्नुहोस् उपयोगी फाइदाहरु बारे
घीउको बारेमा आम मानिसको धारणा यही छ कि यसको सेवनले वजन बढ्छ । जबकी आयुर्वेदका अनुसार, घीउमा क्यालोरी अधिक हुन्छ र साथै यसमा हाई सेचुरेटिड फ्याट पनि हुन्छ तर यसले पाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ । घीउको सेवनले कब्जियतको समस्याबाट छुटकारा मिल्छ र वजन घटाउनमा मद्दत मिल्छ । गाईको घीउमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन, जसबाट मोटोपन बढ्ने समस्या रहँदैन । यसको साथै गाईको घीउ स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक रहन्छ । जान्नु...